Torbit Insight ဖြင့်ဆိုက်၏မြန်နှုန်းကိုစောင့်ကြည့်ပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 6, 2012 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2016 Douglas Karr
ဆိုက်သည်နှေးနေသည်။ ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်နှစ်များတစ်လျှောက်ဤသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်မည်မျှအကြိမ်ရရှိခဲ့ကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။ ဆိုက်အမြန်နှုန်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အကန့်အသတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ visitors ည့်သည်များကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်သည်၊ သင့်ဆိုဒ်ကိုဂူဂဲလ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်ဆန်သောဆိုဒ်များကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်သည့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Flywheel တွင် WordPress - ဒါကတစ် ဦး Affiliate link ကိုပါပဲ။
သောမှတ်စုတစ်ခုရယူခြင်း site သည်နှေးသည် ၎င်းသည်ပြhundredsနာရာပေါင်းများစွာကို အခြေခံ၍ လုပ်နိုင်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ bandwidth မည်မျှရှိသည်၊ လူမည်မျှအသုံးပြုနေသည်၊ နောက်ခံ download လုပ်ခြင်း၊ သင်အလုပ်လုပ်နေသော browser၊ browser add-ons များလည်ပတ်နေခြင်း၊ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောဆိုဒ်ဟုတ်မဟုတ်၊ သင်၏ဒိုမိန်းများတည်ရှိရာ၊ ထိုဆိုက်ကိုလက်ခံထားသောနေရာ၊ တူတူပင်တွင်အခြားဆိုဒ်များမည်မျှတင်ထားသည်၊ သင့်ဆာဗာကဆိုက်ကိုသိုလှောင်ထားပုံ၊ နှင့် static အရင်းအမြစ်များကို CDN အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်း ကပ်၍ မေးမြန်းသောအခါပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြောပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်တူသော site များသို့သွားရောက် Pingdom မြန်နှုန်းမြင့်ကိရိယာအချို့ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းတို့အပြင်ရှိလူတိုင်းပြproblemsနာမရှိကြောင်းသူတို့ကိုသက်သေပြပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါသူတို့သိတဲ့သူတိုင်းပြproblemsနာတက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့။
ပြီးတော့ Google Search Console (Labs section) မှတစ်ဆင့်သင်၏စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြန်နှုန်းကိုအစီရင်ခံရန် toolbar ကိုအသုံးပြုသောလူများအပေါ်မူတည်သည်။ စစ်မှန်သောအဖြေရရန်သင်သွားနိုင်သောနေရာများမရှိပါ။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာလား။ Torbit ထိုးထွင်းသိမြင်မှု သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ဖြည့်ဆည်းပေးသောအမှန်တကယ်အသုံးပြုသူတိုင်းတာသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ visitors ည့်သည်များနှင့်သင်၏ site ကိုအရှိန်လျှော့။ သင့် site ၏အရှိန်အဟုန်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
Torbit ထိုးထွင်းသိမြင်မှု အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်အမှန်တကယ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာဖွင့်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသည်နှေးကွေးလာပြီးမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ထို tool သည်သတင်းအချက်အလက်များကို pin-point သို့တူးသည်။ တစ်စက္ကန့် resolution ကဒေတာကိုအချိန်မှန်ရရှိနိုင်စေသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်းနှင့်ပြန်လည်တွန်းပို့မှုနှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများ၊ တိုက်ရိုက်မြေပုံမြင်ကွင်းတွင်သတင်းအချက်အလက်၊ သုံးစွဲသူဝန်ချိန်၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပျမ်းမျှထိပ်တန်းရာခိုင်နှုန်း၊ မက်ထရစ်နှင့်ထိပ်တန်းရာခိုင်နှုန်းများအကြားဆက်စပ်ပုံ၊ ဘရောင်ဆာများနှင့်ပထဝီဝင်အနေအထားများနှင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောနမူနာများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မည်သို့ရှိမည်ကိုစိတ်ကြိုက်အကြံပြုပါသည်။ WordPress ဆိုဒ်ကိုသင်ဖွင့်လျှင်သင်ထ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြေးနိုင်သည် သူတို့ရဲ့ WordPress Plugin ကို.
ဤအချက်အလက်ဖြင့်ယခုနောက်ဆုံးကုဒ်ဖြန့်ကျက်မှုကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်အကြောင်းပြချက်အလွန်အကျွံဆာဗာများဖြစ်စေ၊ ယခု…သင်သည်သင်၏အလုပ်ကိုလုပ်နေကြောင်းနှင့်ဆိုက်သည်ကြီးစွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းသင့် client အားသက်သေပြနိုင်ခြင်းကိုယခုခွဲခြားသိနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ပထ ၀ ီအနေအထားအရပထဝီဝင်အနေအထားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းမွန်ပါသည်
စျေးနှုန်းကလည်းမှန်ပါတယ် ၏အခြေခံဗားရှင်း Torbit ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလစဉ်စာမျက်နှာ ၁၀၀၀,၀၀၀ အထိကြည့်ရှုရန် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောနမူနာများနှင့်ရက် ၃၀ အတွင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုအပါအဝင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ပြissuesနာများကိုအသေးစိတ်လေ့လာလိုပါကသင်၏အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးလည်ပတ်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အချိန်အားဖြင့်စကားဝိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပြုလုပ်လိုပါကအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
Tags: flywheelgoogle webmaster များpagespeedမြန်နှုန်းမော်နီတာမြန်နှုန်းစောင့်ကြည့်မြန်နှုန်း troubleshootingတောဘိTorbit ထိုးထွင်းသိမြင်wpengine
Paywment ဖြင့် ၁၅ မိနစ်အတွင်း Facebook စတိုးတစ်ခုဖွင့်ပါ
ဇွန် 6, 2012 မှာ 7: 54 pm တွင်
ဒီအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug, ဒီစျေးနှုန်း tag ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအလွန်အေးမြဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန် 6, 2012 မှာ 8: 20 pm တွင်
သင်သည် @ twitter-353825851 @ disqus ကိုကစားသည်။ ငါလွန်းဒါစဉ်းစား !!!
7:2012 pm မှာဇွန် 9, 34
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်၏အရေးကြီးမှုကိုသင်အမှန်တကယ်လျှော့တွက်။ မရပါ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီဇိုင်းကကြီးနေရင်တောင်မှဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်ရင် visitors ည့်သည်တွေကိုဆုံးရှုံးမှာပါ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုနှစ်သက်သည်။
9:2012 pm မှာဇွန် 2, 34
Doug, သင် Torbit Insight ကိုအသုံးပြုနေကြောင်းကြားရတာကောင်းပါတယ်။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်